चलचित्र “ए मेरो हजुर २” को प्रिमियर, यस्तो आयो प्रतिकृया? (भिडियो सहित) – Etajakhabar
चलचित्र “ए मेरो हजुर २” को प्रिमियर, यस्तो आयो प्रतिकृया? (भिडियो सहित)
काठमाडौं को कुमारी हलमा आयोजित एक भब्य समारोहमा नेपाली रङ्गकर्मीहरुको बक्लो उपस्थितीका बिच चलचित्रको प्रिमियर गरिएको हो। चलचित्र हेरिसकेपछी चलचित्र सर्बोत्क्रिस्ट बनेको र यसले ईतिहास रच्ने सबैले प्रतिकृया दिएका छन।
झरना थापाको डेव्यु निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह, सलिनमान बनियाँ, सलोन बस्नेत, अनुभब रेग्मी सुमन पौडेल लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। चलचित्रको उत्कृष्ट पक्ष भनेको कमेडी र योङ लभ स्टोरी नै हो।
चलचित्र हेर्न आएका सबै चलचित्रकर्मीले लामो समय पछी एउटा उत्कृष्ट चलचित्र हेर्न पाएकोमा खुशी ब्यक्त गरे। उनिहरुले भने चलचित्रको सुरुवात देखी अन्तिम सम्म पर्दा बाट आँखा हट्दैन भन्दै नयाँ धार र पुरानो धार भन्नेहरुका लागि झरना थापा ले चलचित्र मार्फत गतिलो झापाड हानेको प्रतिकृया दिए।निर्देसकिय पक्ष निकै उत्कृष्ट रहेको धेरै जसोको प्रतिकृया थीयो। झरना थापा अभिनयमा जती सफल थीईन त्यो भन्दा बडी सफल निर्देशनमा भएको प्रतिकृया चलचित्र हेर्न आएका धेरै जसो निर्देशकले दिएका थीए। चलचित्र शुक्रबार देखी अल नेपाल रिलिज हुँदै छ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १६, २०७४ समय: १३:१९:५६